About Us - MNMA
(+95) 01-388631 mnacentral@gmail.com
Former President of MNMA
Former Secretary of MNMA
Central Executives of MNMA
Continuous Nursing & Midwifery Education
To support the achievement of Universal Health Care and improve the health of the people of Myanmar by upgrading the skills of the unified nursing and midwifery workforce and raising the status of the nursing and midwifery professions
To support nurses and midwives to improve the population’s health through the delivery of equita-ble, quality health services without discrimination
As President, I sincerely hope that the entire community of healthcare profession will willingly
take part in this awesome responsibility of Myanmar Nurse and Midwife Association, which has
persevered through the waves of modern nursing history over the past seven decades and all of
us will be able to enjoy the fruits of our passion and hard works by pursuinganew future for the
The MNMA isaNational Non-governmental Organization (NNGO) founded in 1948. Our vision is to become an association of choice for all nurses and midwives in promoting and maintaining the advancement of nursing and midwifery profession to ensure that nursing and midwifery knowledge and practice are recognized as vital components of individual, family, community and population within the Myanmar Healthcare System.
The Myanmar nurses and midwives devoted to develop and promote high standards of nursing and midwifery practice, uphold the image of nursing and midwifery profession, stand for the professional code of ethics, personal and professional conducts, be the focal point of national and international nursing networking, implement and collaborate with International Non- governmental Organizations (INGOs) and other (NNGOs) for health services and to represent as NNGOs through unifying the voices of nurses and midwives in Myanmar.
With the improvements and advancements in technology and the internet the need, necessity and importance of website is in fact increasing that can lead to face new challenges and lead innovation in higher education. Since the traditional text-based approach to education is rapidly transforming intoamulti-dimensional approach that utilizes images, virtual spaces, the changes in methods and tools of education is changing the contents of learning. It is not only just the online delivery of education through online courses or tutorials but alsoavirtual educational platform to initiate interaction with higher education consumers around the world. It is hoped that this website will bring light to the world by fostering in-depth academic research, inspirational education, and the spirit of community services and the services of organization.
Burma Nurses’ and Midwives’ Association
(BNMA) မြန်မာပြည် သူနာပြုနှင့်ဝမ်းဆွဲဆရာမများအသင်း
ပဋိဉာဉ်စာဆမ်းရေးဆွဲအတည်ပြုသည်။ Memorandum of Association
မြန်မာပြည် သူနာပြုဆရာမများအသင်း Burma Nurses’ Association(BNA)
ဧပြီလ ၂၁ ရက်နေ့၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သူနာပြုကောင်စီဝင် အသင်းဖြစ်ခဲ့သည်။
၄၁-ကြိမ်မြောက်ညီလာခံတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း ရေးဆွဲအတည်ပြုသည်။
သြစတေးလျနိုင်ငံ၊ မဲလ်ဘုန်းမြို့တွင် ကျင်းပသည့် ၁၂ ကြိမ်မြောက် ICN Congress
၅၁ ကြိမ်မြောက်ညီလာခံတွင် “အခြေခံစည်းမျဉ်း” အဖြစ်ရေးဆွဲအတည်ပြုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ သူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်း – Myanmar Nurse and Midwife Association (MNMA)
ဗဟိုအဖွဲ့အထူးအစည်းအဝေးတွင် “ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံစည်းမျဉ်း” အဖြစ်ရေးဆွဲအတည်ပြုသည်။
၁/ ပြည်တွင်း/ ၀၀၀၉ (ပြည်ထောင်စုအဆင့်)
၁၉၉၆ ခုနှစ် ၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်
၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၁၄ ရက်
၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက်
MNMA အား ICN ၏အဖွဲ့အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလွှာ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သူနာပြုကောင်စီဝင် အသိအမှတ်ပြုလွှာ
MNMA အား ICM ၏အဖွဲ့အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုလွှာ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သူနာပြုကောင်စီဝင် အသိအမှတ်ပြုလွှာ ၂၇-၆-၂၀၁၈ – ၂၉-၅-၂၀၁၈ တွင်ဝင်ခွင့်ရသည်။
နိုင်ငံတော်အစိုးရက "ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့" အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသော ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်
အသင်းအား နိုင်ငံတော်က ပြည်ထောင်စုအဆင့် ပြည်တွင်းအသင်းအဖွဲ့ အသိအမှတ်ပြုကဒ်ပြား
(International Council of Nurse) အဖွဲ့ဝင်အသိမှတ်ပြုလွှာ
မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြု နှင့် သားဖွားအသင်း အား အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သူနာပြုကောင်စီ (International Council of Nurse) အဖွဲ့ဝင် အသိမှတ်ပြုလွှာ ပေးအပ်သည့် အခမ်းအနားကို သြစတြေးလျာနိုင်ငံ မဲလ်ဘုန်းမြို့၌ ၂၁-၄-၁၉၆၁ ရက်နေ့က ၁၂-ကြိမ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သူနာပြုကောင်စီညီလာခံ တွင်ကျင်းပရာ အသင်းဥက္ကဌ ဒေါ်ခင်မူအေး တက်ရောက်လက်ခံခဲ့စဉ်။
Princess Srinagarindra Award, 2012 ဆုရှင် MNMA အသင်း (၁၉၈၈-၂၀၀၄)
Princess Srinagarindra Award, 2012 ဆုရှင် ဒေါ်အီလင်းဘာဘရို အား ထိုင်းဘုရင့် သမီးတော် မဟာချက်ကရီသီရိဒုံ က ဂုဏ်ပြု
မြန်မာနိုင်ငံသူနာပြုနှင့်သားဖွားအသင်းဝင် ဖလောရင့်နိုက်တင်ဂေးလ် ဆုရှင်များ
၁၉၆၃ ခုနှစ် ဖလောရင့်နိုက်တင်ဂေးလ် ဆုရှင်
၁၉၉၃ ခုနှစ် ဖလောရင့်နိုက်တင်ဂေးလ် ဆုရှင်
၂၀၀၁ ခုနှစ် ၊ဖလောရင့်နိုက်တင်ဂေးလ် ဆုရှင်
၂၀၁၅ ခုနှစ် ၊ဖလောရင့်နိုက်တင်ဂေးလ် ဆုရှင်
သားဖွားဆရာမ နန်းသန်းသန်းဦး (၂၀၁၁ ခုနှစ်)
ဒေါ်ခင်မူဧ R.M.N.(B), S.R n., S.C.M.(Eng). သူနာပြုဆရာမချုပ်
The Myanmar Nurse and Midwife Association (MNMA) represents the nursing and midwifery professions.
80/84, Shwe Bon Tha St.,, Pabedan, Yangon , Myanmar
Copyright © 2021 All Right Reserved. Powered by MISL.